Ntak emi m ga-eji ihe eji eme ihe na Amazon maka nhazi njirimara ngwaahịa?
N'oge a, ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị na-ere ahịa azụmahịa na Amazon, e nwere ọkwa dị egwu nke ahịa maka ngwaahịa gị na ire ere n'ebe ahụ. Ọ na-aghọkwa ihe dị mkpa iji mee ka ibe gị pụta ìhè na nchọpụta ngwaahịa. Ọ bụ ya mere na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịlanarị dịka onye na-ere ahịa na-enweghị ihe ọ na-eme ma ọ bụrụ na ịhọrọ ezigbo amaokwu dị iche iche nke Amazon.Ma n'ihu ihe ọ bụla ọzọ, m na-atụ aro ịmalite site na mpempe akwụkwọ - leasingruecklaeufer computer. Kedu ihe mere isi okwu gị ji achọpụta ihe dị mkpa? Ọfọn, ka anyị hụ.
Gịnị Bụ Keywords Amazon?
Dị ka nnukwu engines ọchụchọ (dị ka Google n'onwe ya, yana Yahoo, Bing, wdg. ), ịkwesịrị ịnweta ngwaọrụ ndị nwere ike ịkọwapụta amaokwu Amazon maka nchọpụta ịchọpụta okwu ndị ahụ a kapịrị ọnụ, ahịrịokwu ma ọ bụ ahịrịokwu nke ndị na-ere ahịa na-eji ya eme ihe mgbe ị na-achọ ngwaahịa na ire ere n'ebe ahụ. N'ụzọ dị otú a, nchịkọta ọchụchọ ọ dị ka n'etiti ndị mbụ metric iji gosipụta (n'ezie, dị ka atụmatụ siri ike) ole mmadụ na-eji ụfọdụ isiokwu ma ọ bụ okwu ọchụchọ ogologo-tail ịchọpụta ihe ha na-achọ.
Ntak Iji Amazon Keywords Generator?
Nke a bụ ụfọdụ ihe mere ị ga-eji ghọta mkpa dị mkpa nke ịchọta mmemme na-emepụta ngwa ngwa Amazon.N'ikpeazụ, ọ dị mkpa maka ịhọrọ mkpụrụ okwu ziri ezi nke a na-atụ anya ya:
Mee ka ngwaahịa gị dịkwuo mfe inweta ahịa ahịa ọ bụla na Amazon. N'ikwu ya n'ụzọ doro anya, yana isiokwu ndị ziri ezi gụnyere maka ndepụta ngwaahịa gị, ọ ga-adị mfe maka ndị ọzọ na-enyocha ndị mmadụ ịchọta ngwaahịa gị - site na ịmezi nkwalite ịntanetị echere maka ihe ụfọdụ / nchọpụta ngwaahịa.
Gbanyụọ ihe ndị ọzọ a na-elekwasị anya na weebụ okporo ụzọ weebụ - kpọmkwem na ibe gị / ibe weebụ. Ekwuru m na ịnweta ọkwa dị mma maka otu isiokwu maọbụ ogologo ọchụchọ dị ogologo-eme ka ọ dịkwuo mfe maka A9 algorithm ịchọta gị. N'ụzọ dị otú ahụ, ọganihu dị elu nwere ike ịme ka ị nwee ike ịmalite ịzụ ngwaahịa ndị ọzọ na ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị na-achọ ihe yiri nke ahụ ma ọ bụ ịchọ n'ime otu ụdị ihe ahụ.
Ebee ka Gụnyere Keywords?
O doro anya na ebumnuche gị bụ isi ezubere iji mee ihe n'ime nkesa mgbasa ozi kachasị mma. Ka anyị chee ya ihu - njirimara kachasị mma nke ngwaahịa gị bụ ihe na-aga n'ihu, na-ewe oge ma na-arụsi ọrụ ike. Ma ọ bụrụ na ị dị njikere na njikere itinye oge ụfọdụ na ya, ị ga-enwe ike ime n'ụzọ nkịtị n'ụzọ zuru ezu azụmahịa online na Amazon. Ya mere, ozugbo i weputara ezigbo amaokwu Amazon dị iche iche - ebe ị ga-eji isiokwu kachasị mma gị na ọnụ ọgụgụ ndị ọzọ bara uru na-atụ aro na aro isiokwu? Nke a bụ akụkụ ndị dị mkpa nke ndepụta ndepụta ngwaahịa gị ka a kachasị mma maka mkpado gị:
Mpempe akwụkwọ ngwaahịa (ebe kachasị mma iji tinye okwu ndị bụ isi n'usoro iwu ha dị ntakịrị).
Akụkụ nke nkọwa ngwaahịa (a chọrọ ịgụnye ọtụtụ mkpokọta okwu ogologo oge gị).
Ndepụta nke ihe nkwụpụta (n'eziokwu, ọ bụ obere oge nke nkọwa ngwaahịa gị, ma jide n'aka na ị nweghị isiokwu ọ bụla gụnyere ugboro abụọ na aha gị na ndepụta nke bọmbụ).